Jaalataa Lammii Jimmaa irraa, Gumaa Saaqetaa Dirre Dhawaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaalataa Lammii Jimmaa irraa, Gumaa Saaqetaa Dirre Dhawaa
Jaalataa Lammii Jimmaa irraa, Gumaa Saaqetaa Dirre Dhawaa
Jaalataa Lammii Jimmaa irraa, Gumaa Saaqetaa Dirre Dhawaa irraa.
Namuma qeerroowwan qaxalee kana lamaan maqaa dhahu hin argu, lafa Shamsadin Taha H/Adam Saaddoon wal qixxeeffamee waamamaa jiru keessatti Gumaa Saaqataa fi jaalataa Lammii irraanfachuun loogummaadha. Dhugaan isiniin jedha loogummaa guddoodha.
Jaalataa Lammii Jimmaa irraa, Gumaa Saaqetaa Dirre Dhawaa irraa guyyaa 15 dura ukkaamfamanii hidhaman. Hanga yoonaatti bakka jiraniyyuu hin beekamne. Qeerroowwan kun qaxalee sagalee uummata keenyaa tahuun akka gaariitti hojjechaa turaniidha.
#Free Jaalataa Lammii!
Via: Dhiiroo Garbii
Akka gabaasa Sheger Fm 102.1 “tti addaan cituu network torbee lamaan darbaniin wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti kubbaaniyyaawwan tajaajila geejjibaa intarneetii fayyadamuun tajaajila laatan kanneen akka Ride jedhaman qarshi miiliyona 400 torban lama qofa keessatti akka kasaaran gabaase.dabalataanis Finfinnee keessatti yeroo ammaa qaala’insi jireenyaa heddu sodaachisaa dhufeera torbee lamaan kana qofa keessatti.
Miseensi Adda Bilisummaa Oromoo Dr Roobaa Jooboo biyya Sa’udii arabiyaa magaalaa Riyaaditti Adooleeysa 14,2020 du’aan addunyaa kana irraa booqateeti jira.
Dr Roobaa Jooboo 1965 kibba baha Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaattii kan dhalatee guddatee hoggaa tahuu Dr inni abbaa Joollee 3ti.
Joollee isaa sadeen keeysaa Inni angafaa (Mujaahid Roobaa Jooboo) biyya Malisiyastti Universtii kan barachaa jiru haggaa tahu inni 2ffaa biyya Chaainaatti barachaa ture.
Garuu abbaa isaa Dr Roobaa Jooboo dhukkabsachiisuuf barnoota isaa addaan kutee biyya Sa’udii arabiyaatti abbaa isaa dhukkubsachiisaa ture.
Intalti isaa tan 3ffaa (quxxusuun) Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti University barachaa jirti.
Dr Roobaa Jooboo biyya Sa’udii arabiyaa magaalaa Riyaad Ganda Manffuuhaa ja’amu keeysatti bara 1998 irraa egalee kan jiraachaa ture hoggaa tahuu Qondaalaa ol-aanaa Kutaa ABO biyya Sa’udii arabiyaa tahuun nama Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfamtuuf gumaachaa ol-aanaa nama gumaachaa ture tahuuni Dr Roobaan beekkama.
2012 irraa egalee Prez. Hawaasa Oromoo biyya Sa’udii arabiyaa kan walii-gala tahuun hawaasa Oromoo naannichatti jiraachaa jiran kan tajaajilaa ture hoggaa tahuu Dr Roobaan nama haalaa fi amala gaarii qabu tahuuni beekkama.
Dr Roobaa Jooboo bara 2019 irraa egaleeti dhukkubsachaa ture.
Garuu duutii waan hin olamneef Dr Roobaa Jooboo July 14,2020 du’aan addunyaa kana irraa booqate.
achuma magaalaa Riyaaditti sirna awwaalcha isaa adooleeysa 15,2020tti raawwatame.
Firaa fi aalii hundaaf jajjabina hawwaa Dr Roobaa Jooboo tiin Jannat al-firdoowsiin si haa qananiisu jennaan.
Tarsiimoon Qabsoo Gabaa Lagannaa Bifa Kamiin Yoo ta’e Miidhee guddaa Mootummaa Abbaa Irree Ethiopia irratti fiduu danda’a?
Maree Haayyota Economy Lama:
Prof. Tafarii Margoo fi Prof. Muhammad Xaahiiroo Waliin Goone,
Keeping political prisoners in Solitary confinement and dark basements
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: ‘Hanqina qabinsa mirgaa hidhamtootarra gahu hordofaan jira’ – Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa